Imikhuba Eyisi-8 Elula Bonke Abalimi Bensimu Abayenzayo Nsuku Zonke - Ukuphefumulelwa Kwezingadi
Imikhuba Eyisi-8 Elula Bonke Abalimi Bensimu Abayenzayo Nsuku Zonke
Ukube bengiyifuna ngendlela yami, bengizoyibiza ngale ndlela: Izeluleko Ezingama-20,493 Eziphumelelayo Abalimi Bensimu Bayazilandela.
Lokhu engikushoyo ukuthi, kukhona izinto ezincane eziyizigidi ezenziwa ngabalimi abangakholeki ukuthola izivuno ezimangalisayo kanye nezingadi ezinhle .
Lolu hlu luyisifinyezo sami esikhulu - okubalulekile abalimi abaningi abasha abangakunaki noma abangakubheki njengokubalulekile.
Ake singene kuwo! Ngaphansi kwendatshana, phawula futhi ungazise ukuthi imuphi umkhuba ongawenzi ngokwanele.
Yondla Umhlabathi Wakho
1. Umquba Konke
Isithombe nguMargo Brodowicz ku-Unsplash
I-Liner eyodwa: Ungavumeli noma yini ichithe.
Ukwenza umquba kuyisikhali esiyimfihlo sabalimi abangakholeki. Bayazi ukuthi bangakuthola kanjani “okuthile okungenamsebenzi” - badonsa inzalo ngezinsalela zokudla, izingcezu zokhuni, kanye nazo zonke izinhlobo zemfucumfucu abaningi bethu abakulahla ngaphandle kokucabanga.
Kungumqondo olula: uqala ngodoti wokudla, amaqabunga , nemfucumfucu yeyadi, bese uphuma ngakolunye uhlangothi unomquba ocebile, omnyama ukondla inhlabathi yakho.
Akunandaba ukuthi usebenzisa i- umquba we-tumbler , umqambi wezikelemu , noma umgqomo wasendlini ongaphakathi ukwenza umsebenzi wenziwe - okubaluleke kakhulu ukuthi ujwayele ukwenza umkhuba wokwenza izinto zakho zokungcola.
2. Sebenzisa Umquba Wakho
I-Liner eyodwa: Ukwenza umquba akukuhle ngaphandle kokuthi wena, uyazi… uwusebenzise!
Kuyinto eyodwa ukwenza umquba omangalisayo futhi into ehluke ngokuphelele ukuwusebenzisa kahle. Abalimi abanekhono bayazi ukuthi bangafaka kanjani umquba:
amakhanda amnyama ngeke ahambe
Yisakaze ezansi kwezitshalo ukunqanda izifo
Faka kufayela lakho le- ukubumba inhlabathi ukwandisa ukuzala okukhipha kancane kancane enhlanganisweni
Gqoka phezulu imibhede yakho ephakanyisiwe ukuze uthuthukise ikhwalithi yenhlabathi
Yisebenzise kakhulu emhlabathini ophelile ukuyibuyisela ekuvundeni
Fafaza otshanini bakho ngemuva kokukuphakamisa ukwandisa ukukhula
Iphuzu engilivezayo lapha ukuthi… sebenzisa umquba wakho . Yisebenzise yonke indawo!
3. Qaphela Izinto
I-Liner eyodwa: Gcina iso elibukhali engadini yakho, njengephoyisa eligxotshiwe.
Kunezinto eziyisigidi ezingahamba kabi (noma kwesokudla) engadini yakho. Abalimi abanolwazi banjalo-banolwazi. Babekile isikhathi sangempela ezingadini zabo, bezikhandla futhi bebona ushintsho oluncane olwenzeka usuku nosuku.
Babheka izimpawu ezincane ezibonisa inkinga yezinambuzane, ukuzala, noma izifo. Ngemuva kwalokho bazilungisa kahle ngaphambi kokuthi izinkinga zivele esandleni.
Bezwa ushintsho emazingeni okushisa, emoyeni, emvuleni nasenhlabathini. Bayazi ukuthi yini can ukulawula, nokuthi bathini angeke , bese begxila kulokho abakwazi ukukulawula.
I-Liner eyodwa: Vikela izitshalo zakho nenhlabathi ngomkhuba omuhle wesivalo semifino.
I-mulch ingacatshangwa kangcono njengesihlangu esivikela inhlabathi nezitshalo zakho.
Isiza ukulawula ukushisa kwenhlabathi
Kuvimbela ukuhwamuka kwamanzi
Kugcina ukhula phansi
Ivimbela izifo ezithwalwa ngumhlabathi ekuthikanyeleni izitshalo
Abalimi abanesipiliyoni balala ngokukhululekile, futhi bavundisa ngezinto eziphilayo ezizogcina zidilikile zingene emhlabathini.
Baphinde basebenzise imibono eshibhile yes mulch ukugcina izindleko zabo ziphansi engadini, ngoba bayazi ukuthi ukusebenzisa imali eningi akubalulekile - ukuthola imiphumela emihle kakhulu.
5. Yondla Umhlabathi Wakho
I-Liner eyodwa: Umhlabathi udinga ukudla okuseqophelweni eliphezulu, okuhle isikhathi eside, hhayi ukudla okungenamsoco.
Abalimi abanesipiliyoni bayazi ukuthi izitshalo zabo zithola umsoco wazo emhlabathini, futhi bawondla ngokufanele. Banikeza umhlabathi wabo umquba ophele kahle, ogcwele amabhaktheriya awusizo, izibungu nesikhunta.
Badlala umdlalo wesikhathi eside - ukondla inhlabathi ngezithako ezisezingeni eliphakeme esikhundleni sokuchibiyela ngomanyolo osheshayo futhi ongcolile ohlukaniswe nezinhlelo zemvelo.
6. Ukuzivocavoca Ukuzivikela
I-Liner eyodwa: I-ounce yokuvimbela engadini ivame ukubiza amakhilogremu ayishumi okwelashwa.
Abalimi abanesipiliyoni bayazi ukuthi izinkinga zixazululwa kalula uma bengavunyelwe ukuba yizinkinga nhlobo.
Lokhu kusho ukuthi bayasebenzisa thatha uwoyela ukuvikela izinambuzane nezifo, bakhetha okulungile indawo ekhulayo , futhi wazi ukuthi ukushoda kwezakhi kubukeka kanjani . Benza lezi zinto ngoba kulula ukuvimbela inkinga ukuthi yenzeke kunokuxazulula leyo etholakale esandleni.
7. Yabelana Ngomcebo
I-Liner eyodwa: Yabelana ngezithelo zomsebenzi wakho futhi ukubuke konke kubuyela kuwe okuphindwe kayishumi.
Abalimi abanokuhlangenwe nakho bakhula ngaphezu kwalokho abakudingayo - bese benikeza okunye okunye. Bayazi ukuthi okuncane abakudelayo ekunikezeni isivuno sabo kuzobuyela kubo ngokuphindwe kayishumi ngomusa kanye nokuxhumana nomakhelwane babo, umndeni kanye nomphakathi wonkana.
8. Yiba khona
I-Liner eyodwa: Kwenze ngothando lwayo, hhayi umphumela.
Ingcweti yabalimi bengadi ngoba bayayithanda. Abekho kuyo ukuvunwa (kahle, hhayi KUPHELA kokuvuna). Luhambo, inqubo, nentshisekelo.
Bahamba bangene ensimini ekuseni, baphuze ikhofi noma itiye, bangenise konke. Kuyinto enhle ukutshala impilo kusuka phansi kuya phezulu - ngokoqobo.
Unomkhuba wokulima engingazange ngiwusho? Ngazise kumazwana abekiwe… Ngiyinsimu engisebenza nayo njengawe futhi ngihlale ngifuna ukukhula kangcono!
ingabe u-brad pitt wakopela ku-angelina jolie
Manje Sesiyazi Abesifazane Bakhetha Lo Sayizi Wepipi, Sibonga ama-3-D Printers
Ukushintshwa kobuso obudala base-Hollywood: I-Tumblr e-Creepy e-Creepy, ne-Hillyous Hilaryous Uyakuthanda
I-14 Logury Logician Yasindisa Kanjani Impilo Yami Yokuqomisana Futhi Ingakusindisa Nawe
6 Genius Imibono Yokugcina Nokuhlela Izinwele Zakho Amathuluzi
Amamodeli Wobuso kuphela kaVictoria Wemfihlo Okufanele Enziwe Ngezithombe
kungani kufanele ngidle indle ngokushesha nje lapho ngidla
kanjani ukwakha ubungane namantombazane
i-salicylic acid ye-keratosis pilaris
umkhono omude 2 piece swimsuit